सिद्धबाबामा सास्ती- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २, २०७६ माधव अर्याल
पाल्पा — बुटवलबाट पाल्पाको निस्दी फर्किरहेका घनबहादुर सुनारी मगरको सुक्खा पहिरोले बगाएर गत शुक्रबार ज्यान गयो । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबामा पहिरोले हानेर उनी मोटरसाइकलसहित भीरमा अड्किएका थिए ।
‘जतिखेरै पहिरो खस्ने भएकाले दुर्घटनामा परेकाको उद्धार गर्न धेरै समस्या हुन्छ,’ दोभान प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक बालबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘घाइते र मृतकको उद्धारमा ढिलाइ हुन्छ ।’
बर्खायाम त छँदै छ, सिद्धबाबामा हिउँदमा पनि सुक्खा पहिरो खस्छ । यात्रु जहिल्यै त्रासमा रहन्छन् । ‘दोभानबाट बुटवल नपुग्दासम्म पहाडतिर हेरेर यात्रा गर्नुपर्छ,’ यात्रु चन्द्र रानाभाटले भने, ‘पहिरोबारे जानकारी नभएकाहरू बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।’ दोभानदेखि ४ किलोमिटर क्षेत्रमा वर्षा लागेपछि कहाँ कति बेला ढुंगा, पहिरो झर्छ पत्तै हुँदैन ।
उक्त खण्डमा पहिरोकै कारण १४ वर्षमा ८९ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरी तथ्यांक छ । उक्त खण्ड कालोपत्रे भएर गाडी सञ्चालन भएको ४८ वर्ष नाघिसक्यो । ०२२ सालमा निर्माण थालिएको सिद्धार्थ राजमार्ग ०२८ सालमा पोखरासम्म पूरा भई ०३५ सालमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
दोभान प्रहरी चौकी प्रमुख घर्तीमगरका अनुसार यो सडक भएर पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङजा, कास्की, बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङलगायत १२ जिल्लाका सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । ‘आधा घण्टा मात्र सडक बन्द भए सयौं सवारीसाधनको जाम लाग्छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै हैरानी खेप्नुपर्छ ।’
रूपन्देहीको सिमाना चिडियाखोलादेखि पाल्पाको झुम्सासम्म ९ किलोमिटर क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ । त्यसमध्ये ४ किलोमिटर क्षेत्रमा बाह्रैमास ढुंगा, पहिरो खस्छ । सडकको रेखांकन नै अत्यन्त कमजोर भूगोलबाट भएकाले मर्मत गर्न चुनौती हुने गरेको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर केदार नेपालले बताए ।
यही सडकबाट ८ वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुंगा ढुवानी हुन्छ । प्रत्येक दिन दर्जनौं टिपर सञ्चालन हुन्छन् । यसैलाई पहुँच मार्ग बनाइएको छ । अत्यधिक भारवहनले सडकमा क्षति पुग्ने गरेको छ । डिभिजन सडकका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी सौजन्य नेपालका अनुसार सडकको सतह अत्यन्तै जीर्ण भइसकेको छ ।
६ वर्षअघि कान्छाराम–जयबाबा गोरख जेभीले मर्मतका लागि लिएको ठेक्का अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । ‘बीचमै निर्माण व्यवसायीले काम छाडेर भागेको अवस्था छ,’ इन्जिनियर नेपालले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई के गर्नुपर्छ भनेर बोलाइएको छ ।’ अहिले व्यवसायीले असोज मसान्तसम्म काम सक्ने निवेदन दिएका छन् । सिद्धबाबामा सडक तलबाट भासिन सुरु भएको छ । दोभानको भूतखोला, विद्युत् हेडबक्सनजिकै र तल्लो र माथिल्लो सिद्धबाबानजिकै तल्लो तहबाट सडक भासिएको इन्जिनियर नेपालले बताए । ३० मिटरको ग्याभियन लगाइएको छ ।
झुम्साबाट चौकी भन्ज्याङ हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गको चरंगे, धागो कारखाना जोड्न गत वर्ष ट्र्याक खुलेको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रूपन्देहीतर्फबाट ५ र झुम्सातर्फ ५ करोडको काम सुरु भए पनि देखिने गरी नभएको स्थानीय माया थापाले बताइन् ।
झुम्साबाट १६ किलोमिटरमा धागो कारखाना पुगिन्छ । यो सडकलाई सिद्धबाबाको विकल्पका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्को विकल्प पूर्वपश्चिम बेलवास–नुवाकोट–दोभान सडक निर्माणको काम अघि बढेको छ । यहाँ कचल र तिनाउ खोलामा पुल राख्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पुलको काम सकिन लागेको छ भने अर्को ठेक्का लागेर काम अघि बढेको छ ।
चुरेक्षेत्र भएकाले निकै कमजोर भूभाग पर्ने प्राविधिकले बताए । पूर्व जाने सवारीसाधनलाई बाँसटारी–झडेवा–खैरेनीतर्फ पनि अर्को विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर झुम्सा र कचल खोलामा निर्माणाधीन पुलका कारण पनि यस सडक खण्डको काममा ढिलाइ भएको छ ।
सिद्धबाबा क्षेत्रको यात्रा जोखिममुक्त बनाउन सुरुङमार्ग बनाउने चर्चा चले पनि यो आर्थिक वर्षबाट बल्ल काम थालिँदै छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्ष ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार सुरुङमार्ग र सुरक्षित सडक निर्माण गर्न ८ अर्ब ७६ करोड लागत अनुमान छ । १ हजार १ सय २४ मिटर सुरुङमार्ग र सुरक्षित सडक बनाउन ६६ महिना लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको तल्लो सिद्धबाबादेखि रामापिथेकस पार्कसम्मको डीपीआर तयार भएको छ । डीपीआर सडक विभाग र सरोकारवाला निकायमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालयका जिल्ला प्रमुख केदार नेपालले बताए ।
स्विस कन्सल्ट्यान्ट आईटीईसीओ–एएफ (इटिको–एफ) ले डीपीआर तयार गरेको हो । फिल्डको अध्ययनमा भने नेपालको प्लानेट टेस्ट कम्पनीले सघाएको थियो । कम्पनीले सुरुङमार्ग उपयुक्त हुने/नहुने पत्ता लगाउन पहाडभित्रको चट्टानसमेत अध्ययन गरेको थियो । पहिरो झर्ने, रोड साइडका सेफ्टी सामग्री भाँचिएको र सडकलाई बर्सेनि क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा समेटेको छ । सिद्धबाबा क्षेत्रको २ दशमलव ५ सय ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा बढी जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तल्लो सिद्धबाबादेखि दोभान चौकी नजिकैसम्मको क्षेत्रलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसमा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने १ हजार १ सय २४ मिटर मात्र छ । माथिल्लो सिद्धबाबादेखि दक्षिणतर्फको ९ सय ८ मिटर खुला सडक हुनेछ । प्रतिवेदनले अर्को ७ सय ९० मिटर रकसेड गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । अत्यधिक जोखिम रहेको क्षेत्रमा सुरुङ घुमाएर लैजाने गरी अध्ययन भएको डिभिजन प्रमुख नेपालले बताए ।
प्रतिवेदनमा ढुंगा खस्ने क्षेत्रमा न्यूनीकरण उपायसमेत सुझाइएको छ । त्यसका लागि सडक चौडा बनाउने, रकनेट साथै रकसेड निर्माणलगायत कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेको सडकको माथिल्लो भागमा बलियो आरसीसी गरेर मोटरसाइकल गुडाउन र पैदल यात्रा गर्न सुरक्षित बनाउने भनिएको छ,’ प्रमुख नेपालले भने, ‘त्यसमा अहिलेको जस्तो खुला हुँदैन । सिसा लगाइन्छ ।’ माथिल्लो भागमा ढुंगा नखस्ने गरी विभिन्न प्रविधि अपनाउने उल्लेख छ ।
सुरुङमार्गमा पनि आकस्मिक अवस्थामा बाहिर निस्कन ३–३ सय मिटरमा ढोका हुनेछन् । सुरुङमार्ग सुरु हुने तल्लो भागमा दुईतले भवन बन्नेछ । पहिलो तलामा ग्यारेज, विद्युतीय कक्ष, भोल्टेज कक्षलगायत हुनेछ भने दोस्रो तलामा विद्युतीय एवं मर्मत कक्ष, कन्ट्रोल, किचन, डायनिङ, कन्ट्रोल रुम, बैठक कक्ष बनाउन सुझाव दिइएको छ । यी सबै काम निर्माण व्यवसायीले सरासर गर्ने हो भने नोभेम्बर २०२५ सम्म सक्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:१५
'मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक’
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको बताएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबारदेखि लागू गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अपादर्शी र अनौपचारिकबाट अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
‘मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ । व्यवसायको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने बीचमा समन्वय कसरी ल्याउने ? आयकर तिर्ने, भन्सार तिर्ने या नतिर्ने बीच अथवा वैध तथा अवैध कारोबार गर्नेलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्‍यो भने सुशासनको कुरा नगर्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अपादर्शी र अनौपचारिकबाट औपचारिक व्यवसायमा रूपान्तरित हुँदै छौं । औपचारिक, वैध र पादर्शी व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ । अनुगमन प्रणाली एउटा कडी हो ।’ कार्यान्वयको क्रममा समान्य कठिनाइ भए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने उनले बताए ।
‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र/व्यवसायलाई पूर्ण औपचारिक बनाउन भन्सार विन्दुबाट सुरु गर्ने, सुशासन, मूल्य अभिवृद्धि करमा समस्या देखेका थियो,’ उनले भने, ‘तर, १० वर्षयता गुनासो कम हुँदै आएको छ ।’ कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या बिस्तारै सुधार गर्दै लैजाने उनले बताए । यो व्यवस्थाले अनधिकृत व्यवसायहरू स्वतः बन्द हुने सरकारको दाबी छ । ‘प्रयोग गर्दा सुरुमा कठिनाइ भए पनि प्रविधि सिक्दै जानुपर्छ । प्रविधिबाट भाग्नु हुँदैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘समावेशिताको कुरा गर्छौं, त्यसका लागि पनि प्रविधिमा सक्षम हुनुपर्छ ।’
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा १३ ‘ग’ मा कानुनबमोजिम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आाधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्रै ओसारपसार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा पनि चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने बिचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादक, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने जनाइएको थियो । सोहीअनुसार २०७६ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा यो प्रणाली २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
भीसीटीएस वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गरेर मात्र मालसामान ओसारपसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । जसअनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालवस्तुको विवरण विभागको वेबसाइटमा राखिएको प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्रै मालवस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो प्रणाली व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयात–निर्यात, उद्योग, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी कम्पनीमा लागू हुन्छ । वितरक तथा थाोक बिक्रेताले थोकस्तरमा बिक्री गर्दा भीसीटीएसमा इन्ट्री गरेर ढुवानी गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
विभागका अनुसार यसले राजस्व अनुसन्धानको चेकपोस्टहरू नहरने भएकाले बिलबिजकका प्रति बुझाउने झन्झटबाट मुक्ति दिन्छ । आन्तरिक ओसारपसार निर्वाध रूपमा गर्न पाइने, प्रयोगकर्ता आफैंले युजर आईडी र पासवर्ड बनाउन सक्ने भएकाले प्रयोगकर्तामैत्री हुने जनाइएको छ ।
व्यवसायीको समय र लागत बचत भई व्यवसायको व्यापार खर्च घट्ने, तथ्यांक र सूचनामा सबै प्रयोगकर्ताको पहुँच बढ्ने मैनालीले बताए । विभागले पहिलो ३ महिना प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ । त्यस अवधिमा प्रयोगमा प्रोत्साहनदेखि विभिन्न परीक्षण गरिनेछ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले प्रणालीले राजस्व चुहावट रोकिने बताए । उनले कर प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणाली लागू गरिएको बताए । यसबाट चलानबाट मालवस्तु ओसारपसार गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट चलाउन बुझाउनु पर्दैन । कार्यालय बिदाको दिन पनि बिनारोकतोक चलानबाट ढुवानी गर्न सकिने, मालसामानबीच बाटोमा थप गर्न तथा झार्न सकिने व्यवस्था रहने जनाएको छ ।
विभागका अनुसार मालधनीले प्रविष्टि गरेर पठाएको आफ्नो मालवस्तुको मात्र जिम्मेवारी वहन गरे पुग्छ । वैध व्यापारमा सहजीकरण भई अवैध व्यापारमा निगरानी बढाउन सहयोग पुग्ने, ढुवानी गरेको सामानको अवस्था (बाटोमा गन्तव्यमा पुगेको आदि) बारेमा जानकारी हुने जनाएको छ ।
के हो भीसीटीएस ?
भीसीटीएस बेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गरेर मात्र मालसामान ओसारपसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालवस्तुको विवरण विभागको वेबसाइटमा राखिएको प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्रै मालवस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:४२
संस्थागत भ्रष्टाचार बढेपनि नियमन गर्ने सरकार चुक्यो : नेता शाह
सुनसान पाल्पा दरबार
महिलामा प्रदेश ५ बाट घिमिरे निर्वाचित
चक्कु प्रहार गरी बुहारीको हत्या